Photos: Monsoon Music Concert @ National Theatre on 16 June | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Photos: Monsoon Music Concert @ National Theatre on 16 June
Here are the photos of Monsoon Music Concert which was held on 16 June 2011 at National Theatre, Yangon. Myanmar popular singers; Rzarni, Han Htun, Naw Naww, Sai Sai Kham Hlaing, Lin Linn, Moe Moe, Tun Aindra Bo, Phyu Phyu Kyaw Thein, L Seng Zi, Rebecca Win, Chan Chan and A Thin Chow Swe performed for this concert together with Metal Zone Band.
Tun Aindra Bo
Htet HtetJune 20, 2011 at 5:39 AMအေသင်ချိုဆွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းတမျိုးကြီးပဲကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးReplyDeletephyuJune 20, 2011 at 7:40 AMyes i agree, what Htet Htet says is correct...htun eindrabo look very bad alsoReplyDeleteThetJune 20, 2011 at 9:11 AMထွန်းအိန္ဒာဗုိုလ် တစ်ယောက် မရှိတဲ့ရင်သား အတင်းတွန်းတင်ပြီး ဝတ်ထားလုိုက်တာ စိတ်ညစ်လုိုက်တာ။ သူက နာမည်ရပြီးသားပါ။ ဒီအသက်ဒီအရွယ် သူများတွေ ဗုိုလ်စိတ်ပေါက် အရူးထတုိုင်း သူလုိုက်မလုပ်သင့်ဘူး။ ကြည့်ရတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်။ReplyDeletethanzinSeptember 10, 2011 at 5:49 PMအေသင်ချိုဆွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းတမျိုးကြီးပဲကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးReplyDeleteAnonymousOctober 3, 2013 at 9:48 PMနင့်ကိုကရိုဏ်းနေလို့လားReplyDeleteAdd commentLoad more...